Hevitra MPANOHARIANA | Finoana | 6
2008-10-31 @ 21:24 in Finoana
Somary nahagaga ihany fa tsy re teto amin'ny tanàna tamin'ny dokambarotra na ny mifanahatahaka amin'izany loatra ilay fety malaza any Etazonia na Amerika avaratra... Tsy fantatro loatra antsoina hoe Halloween teto Madagasikara e! Nisy ve ny fandrarana sa inona ny antony? Tamin'ny herintaona manko noezahin'ny mpivarotra ihany ny hampalaza azy ity saingy lasa fetin'ny mpifankatia bis ihany ilay izy. Nentina nandaniana ny alina fotsiny. Levona tanatin'ny Zoma mahafinaritra tsotra fotsiny aloha izy tamin'ity taona ity. Tsy nisy fanamarihana manokana intsony.
Toa nisy ihany angaha ny fivezivezena eran'ny tanàna izany, saingy tsy nandre aloha aho, hoe asiana fety eny amin'ny araben'ny fahaleovantena amin'ity alina ity; nefa lasa ihany ny eritreritro hoe sao dia ilay fetin'ny fizahantany karakarain'ny Ortana ihany izany fa afangaron'ny olona heveriny fa hanamarika ny Halloween ny TGV. Izaho kosa tsy mihevitra ny mpitantana ny tanànan'Antananarivo haka tahaka be fahatany hanandratra kolontsaina vahiny tsy mahazo ny fon'ny Malagasy tahaka ny Halloween.
Nisy ihany ny radio niresadresaka momba azy ity saingy tsy nanaitra ahy mihitsy e! Ny fantatro dia tsy raharahan'ny besinimaro ihany koa, ary ny tena mahavariana na ny loterana aza tsy mahalala ny maro raha anontaniana. Tsy mba horakorahana ihany koa moa ilay izy fa nentina mangina. Ny mitataovovonan'ny 31 oktobra 1517 manko no nametrahan'ilay Mpanitsy fivavahana Martin Luther (tsy King) ny petra-kevitra 95 teo amin'ny varavaram-piangonan'i Wittenberg (Lutherstad) ary nanoratra tany amin'ny arsheveka Albert de Mayence tsy hampivarotra ny indolzansy intsony. Noheveriny fa fitaka nentina hanaovana varotra fotsiny (hahazoana volabe ) io indolzansy io.
Raha tamin'ny teny Latinina no nanoratana ireo petra-kevitra ireo noho ny fahazarana sy ny fomba dia voadika haingana tamin'ny teny fantatry ny olona ihany (alemana eto). Nahoraka tamin'ny tanàna maro ny momba ity petra-kevitra ity izay nanaraka ny toriteny nafonja ihany koa. Ity indro ity no ilazan'ny mpahay tantara loterana azy hoe andron'ny filazantsara. Tsy ny indolzansy no notoheriny fa ny fivarotana azy (in dr.Theol. MARTIN LOTERA sy ny asany nosoratan'i LJ Danbolt ed faharoa p.63). Tsy nanao tsinontsinona ny indolzansy izy, fa ny filazantsara no kosa no nasandrany ho ambony kokoa (in idem). Ny fiovana sy ny fanitsiana dia nandeha tsikelikely fa ity andro ity kosa no tena nisy fiantraikany goavana indrindra tamin'izay nataon'ity mpanitsy fivavahana ity.
Fa dia inona loatra koa angaha no nahatonga ahy hametraka indray ity tantara ity? Voalohany, teraky na zanaky ny reformasiona aho. Tsy hoe io no tonga lafatra fa mpanoro ny lalana tokony hodiavina ihany ho an'ny mpanara-dia an'i Kristy. Faharoa, tsy mba mpankasitraka velively ny fivavahana lasa raharaham-barotra itadiavam-bola mihoam-pampana aho. Tsy ny vola no mamelona ny fiangonana fa ny Fanahy Masina amiko. Mpanompo mahatoky ny vola fa Tompo lozabe. Mampalahelo anefa fa matetika takon'ny varotra mandrakariva ilay fetim-pivavahana (raha atao hoe fety ihany koa) ka izay mihetsika rehetra dia vidiam-bola avokoa. Tranga iray nanimba ny raharaham-barotra nifandraika tamin'ny fivavahana hiankina amin-javatra tsy mifototra amin'ny filazantsara ity 31 oktobra 1517 ity ka satry averimberiko mandrakariva. Aleo ihany manko amin'ny fahafoizan-tenan'ny tsirairay no anompoana fa tsy vidiam-bola akory ny lanitra.
FLM: Lalampanorenana vaovao hanakanana olona iray?
2008-08-10 @ 08:39 in Finoana
Toy ny kinendriko mihitsy angaha ny mamoaka lahatsoratra rehefa alahady ary vaovao momba ny finoana sy ny fivavahana no avoaka araka izay azo atao amin'izany. Eto indray aho dia mitodika amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Fantatra moa amin'izao fotoana izao fa mety hisy ny "fanovana" madinidinika amin'ny litorojia sy ny lalampanorenan'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Fanovana Tekinika hoy ny iray amin'ny tompon'andraikitra lahika iray izay. Tafiditra amin'izany ny hampidirana anaty Litorojia ny fanekena mpiandraikitra sokoto (scout) sy ny an'ny Fifohazana. Tsy sahy miraparapa amin'ity farany ity aho. Fampidirana ny inona tokoa moa izany? Ampidirina anaty litorojia amin'izay ve ny asa sy fampaherezana sa ny fanokanana mpiandry any am-piangonana fa tsy voatery any amin'ny tobim-pifohazana ihany no tena lazaina?
Tafiditra anaty "fanovana" madinidinika ihany koa ny famerana ny fotoam-piasan'ny mpiasam-piangonana rehetra tsy ho 65 taona intsony fa ho 60 taona indray. Raha ny fahitako hatramin'izay any amin'ny sehatry ny fiangonana dia misy ihany ny mpitondra fivavahana mihoatra ireny fotoam-piasana ireny ny tena iasany any amin'ny sahan'ny fiangonana... fa amin'iny fotoana iny dia miandry ny anaovana jobily azy izy sisa (anokanan'ny fiangonana rakitra) fa tsy homena andraikitra vaovao intsony. Izany hoe tsy tokony hofidiana ho filohan'ny sinaodam-paritany (eveka) na ho filohan'ny anaram-pangonana FLM (arisheveka) intsony na hotendrena amina andraikitra anivon'ny sahan'ny fiangonana.
Eo indrindra isika. Misy ary ny miahiahy amin'io fampihenana ny taona handefasana retirety ny mpiasam-piangonana io ho fikendrena hanakanana pasitora iray heverina ho mifaninana amin'ny filohan'ny FLM amin'izao fotoana izao, Pst Dr,Rakoto Endor Modeste. Ahiahy satria mety ho resin'ny mpifaninana aminy izy, izay tsy iza fa ny Pst Dr Péri Rasolondraibe izany, na dia noho ny lazan'ilay pasitora fotsiny ihany aza. Heverina manko fa efa mihoatra ny 60 taona ny Pst Péri Rasolondraibe, efa nitondra ny fitandremana FLM toby fanantenana 67ha, nandalo kely tao amin'ny FLM Ambatovinaky mialoha ny nanilihana azy hitana andraikitra any Geneve (Suisse) ho talen'ny fampandrosoana anivon'ny FLET (Fiangonana Loterana Eran-Tany),mba hamerenana ny filohan'ny sinaodam-parintany teo ho amin'ny toerany teo aloha, araka ny fijeriko ihany izany.
Zavatra mba fantatro amin'ny Pasitora Péri Rasolondraibe ihany koa ny tolona ataony mba hahapasitora amin'izay ny vehivavy teolojiana...izany hoe ahafahan'ny vehivavy ho mpitondra fiangonana amin'izay. Izy manko no manao fampielezankevitra eken'ny fiangonana amin'izany raha ny filohan'ny sinaodam-paritany Antananarivo Pst Randrianarivelo Joseph kosa no manao fampielezankevitra eken'ny fiangonana hanemorana izany fanaovana ôridinasiona ny vehivavy izany. Ny amin'ny homosexuel indray moa dia tsy mila adihevitra mihitsy fa lavina avy hatrany. Iraisan'ny fiangonana aty amin'ny ila-bolantany atsimo io amin'ny ankapobeny. Lavina tsy ilàna adihevitra mihitsy.Ankoatra izany, ny Pst Péri ihany koa no fantatro anivon'ny FLM nitolona mandrakariva ho amin'ny fampitambarana ho iray ny FLM sy ny FJKM. Efa tsy reko intsony kosa aloha izay tolon'ny raharaha amin'ity fampitambarana ity.
Fahatsapako, izaho jentilisa, mahita ny zotram-piainan'ity pasitora nolazaiko ity dia ny sedra nahazo azy nandritra ny fotoana nitandremany hatramin'izay. Tsy tadidiko ho nahazo andraikitra ambonimbony anivon'ny sahan'ny FLM mihitsy izy fa raha any ivelany kosa dia efa nisy voasoratra ihany ery ambony ery. Miala tsiny aho amin'ny fitenenana somary masiaka fa toa atahoran'ny mpitondra fivavahana hafa izy noho ny herimpanahy (charisme) ananany ve? Koa raha ho voasakana tsy hahazo hirotsaka indray izy raha voaova ny lalampanorenana dia izay no fanakatsakanana faratampony heveriko fa faratampony indrindra nihatra taminy. Toy ny nosakanana tsy hampisy fivoarana ny fiainam-piangonana mihitsy izy nandritra ny androm-piainany. Fahatsapako ihany anefa izany fa tsy voatery hitombina.Izy tenany sy Andriamanitra ihany no tena mahalala.
Raha mitombina ary ny ahiahy dia fanehoana ihany koa fa mbola ety an-tany ny fiangonana ary misy olona mitantana azy. Olona ihany ny mpitondra fivavahana. Mety mampihemotra olona ny mitranga fa efa nampianarina tsy hijery olona ny tena rehefa fivavahana no resahina, satria mpandiso fanantenana ny olona amin'ny ankapobeny, fa Andriamanitra ihany no banjinina.